Afaka Manaisotra Anaran-tsehatra Tsy Mila Didim-pitsarana Ankehitriny Ny Mpanivana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jolay 2016 5:07 GMT
Foibem-pirenena mpandrindra ny anaran-tsehatra ao Rosia manara-maso ny anaran-tsehatra .ru sy .рф. Sary tao amin'ny Wikimedia Commons, CC BY.
Afaka manaisotra anaran-tsehatra ho an'ny tranonkala hita fa mampiantrano sary vetaveta ahitana ankizy tsy misy didim-pitsarana ankehitriny ny mpanara-maso ny haino aman-jery sy ny aterineto Rosiana, Roscomnadzor. Nomen'ny Foibe Mpandrindra ny Anaran-tsehatra amin'ny Aterineto ao amin'ny Firenena Rosiana ho an'ny Roscomnadzor izany fahefana izany.
Nanasonia fifanarahana momba ny fanomezam-pahefana ho an'ny Roscomnadzor nandritra ny forum ara-toekarena iraisam-pirenena tao Saint Petersburg tamin'ny Alakamisy 16 Jiona ny mpandrindra ny haino aman-jery sy ny sampana mpandrindra ny anaran-tsehatra.
Ny fahafahana manaisotra ny anaran-tsehatra ao amin'ny sehatra .ru na .РФ dia manampy ny lisitr'ireo tombontsoa vitsivitsy ivelan'ny lalàna ho an'ireo sampan-draharaham-panjakana Rosiana, tahaka ny Minisiteran'ny Atitany, ny Biraon'ny Fampanoavana, ary ireo fikambanana hafa manana fifanarahana manokana amin'ny mpandrindra ny anaran-tsehatra.
Amin'ny maha-fitsipika, tsy maintsy mankatò ny tsy maha ara-dalàna ny votoaty antserasera ny fitsarana Rosiana vao azo akatona izany. Saingy tsy voakasika manokana amin'izany fitsipika izany ireo fikambanana voatanisa etsy ambony, satria nomena ny satan'ny “sampan-draharaha mahazaka asa” afaka manondro izay votoaty mampidi-doza izy ireo ary mitaky hakatonana sy hanaisotra ny anaran-tsehatra. Ankoatra ireo sampan'ny governemanta voatanisa etsy ambony, misy ihany koa amin'izao fotoana izao orinasa efatra sy fikambanana tsy mitady tombontsoa any Rosia izay mahazo tombotsoa amin'ny sata “mahazaka asa”: ny Kaspersky Lab, Group-IB, Foiben'ny Teknolojian'ny Aterineto ary ny Ligin'ny Aterineto Voaaro.
Ankehitriny, manatevin-daharana ny lisitry ny voafidy ny Roscomnadzor. Araka ny tatitra avy amin'ny masoivohom-baovao RIA Novosti, hitady tranonkala “mandika lalàna amin'ny fampielezana sary vetaveta misy ankizy” ny mpandrindra ny aterinetom-panjakana ary mitaky ny iray amin'ireo birao fandraketana anaran-tsehatra marobe ofisialy mba tsy hankatò ny anaran-tsehatr'izy ireny. Hanara-maso ihany koa ny Roscomnadzor mba hahazo antoka fa noesorina tokoa ny anaran-tsehatra amin'ilay tranonkala, ary raha tsy manaiky ny birao fandraketana, dia hametraka fitarainana any amin'ny mpandrindra ny anaran-tsehatra Nasionaly ny Roscomnadzor.
Manampy ny rafitra efa misy amin'ny fanakatonana votoaty antserasera ao Rosia ny fitomboan'ny fahefana vaovaon'ny Roscomnadzor. Eo ambanin'ny lalàna amin'izao fotoana izao, azo raràna amin'ny alalan'ny didim-pitsarana ny tranonkala (ohatra, noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona). Azo akatona ihany koa ireo tranonkala raha hita fa manitsakitsaka ny lalàna momba ny fiarovana ny ankizy “noho ny vaovao mampidi-doza.” Ampidirina ao anaty lisitra maintin'ny aterineto ao Rosia ireo avy eo.
Maro ny sampan-draharaham-panjakana afaka mandray anjara amin'ny fanampiana ny lisitry ny tranonkala voaràra: araka ny voalaza etsy ambony, miandraikitra ny fitadiavana izay votoaty antserasera misy sary mamoafady tsy ara-dalàna ny Roscomnadzor; afaka mitory amin'ny fampielezan-kevitra sy fizarana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna ny Sampana Federaly Mpanara-maso ny Zava-mahadomelina (noravàna sy nofoanan'ny Minisiteran'ny Atitany vao haingana); afaka mandràra vaovao ahitana fampielezan-kevitra famonoana tena na mampidi-doza ho an'ny ankizy ny Sampana Federaly ho amin'ny Fanaraha-maso ny Zo sy ny Mahasoa ny Olombelona, ary miandraikitra ny fanakatonana izay votoaty mifandray amin'ny filokana kosa ny Sampana Federaly misahana ny Hetra. Farany, afaka mandràra izay hita fa votoaty “fitaovan'ny mahery fihetsika” ny Biraon'ny Fampanoavana Ankapobeny.
Mandefa ny rohy URLs sy ny mpamatsy tolotra aterineton'ny votoaty hita fa tsy ara-dalàna mankany amin'ny Roscomnadzor, izay miandraikitra ny fandraketana ny lisitr'ireo tranonkala voaràra araka izany ny sampan-draharaha-panjakana rehetra. Alohan'ny ampidirana ny tranonkala ao anaty lisitra mainty, mandefa filazana mangataka amin'ny tompon'ny tranonkala ny mpanivana aloha mba hanaisotra ny votoaty manafintohina. Raha tsy manaiky izany ny tompon'ny tranonkala, ampidirina ao anatin'ny lisitra mainty ny tranonkala ary akaton'ny mpamatsy tolotra aterineto Rosiana.